Mid-Week Evening Humour
အကောက် ၀န်မင်းကြီးကျောင်းတိုက် ကျောင်းဒကာ အကောက်ဝန် မင်း မွလ္လာအီဘရာဟင် မိသားစု
နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာ ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့သည့် လူရည်ချွန်ရွေးချယ်မှု ယခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ပြုလုပ်
BBQ Ban Proposed in Most Polluted Nation
Chilenischer Rotwein zählt nach dem sprunghaften Qualitätsanstieg der 80er und 90er Jahre schon seit Jahrzehnten zur Weltspitze. Zu den wichtigsten Rebsorten gehören Cabernet-Sauvignon, Merlot und Syrah. Die Bordeaux-Rebe „Carménère", eine alte, dem Merlot ähnelnde Rebsorte, wird einzig in Chile in großem Stil angebaut. Chilenischer Rotwein überzeugt durch seine einzigartige Aromatik und Vielschichtigkeit. Durch die besonderen klimatischen Bedingungen werden komplexe, intensive und kraftvolle Rotweine möglich.
Apabila kita merasakan sesuatu itu hak kita kerana berasal daripada kita, maka fikirkan semula, termasuklah dalam hal seremeh hidangan minum petang. Berkenaan hidangan minum petang, setidaknya, ada dua jenis kuih yang sebelum ini, semasa kecil, penulis fikirkan memang berasal daripada negara ini – karipap dan juga donut. Bagi penulis, jika karipap dan donut bukan sesuatu yang 'sangat Melayu' setidaknya pasti kedua makanan kegemaran rakyat Malaysia ini sangat 'sangat Malaysia'. Namun, apabila penulis menonton filem Terminator lakonan Arnold Schwarzenegger (kurang pasti sequal yang keberapa) penulis mula menyedari bahawa donut juga 'sangat Amerika'. Lebih daripada itu, donut atau doughnut (di Amerika donut merujuk kepada variasi doughnut, manakala di UK donut merujuk kepada doughnut versi Amerika!) merupakan antara confectionery yang sangat popular di seluruh dunia – dan tiada apa-apa yang sangat Malaysia pun dengan donut, melainkan kuih keria; bentuk seakan donut yang diperbuat daripada keledek dan disira dengan gula. Sebaik menyedari hakikat ini, penulis menerima donut bukan lagi (semata-mata) hak orang Melayu atau Malaysia.
Resepi Empanada ini juga terdapat dikebanyakan negara di Amerika Latin dengan nama yang berbeza. Di Brazil dan negara kepulauan Cape Verde, resepi ini dinamakan Pastel atau pastéis. Di Costa Rica pula,'epok-epok' dipanggil patí manakala di Aruba, Bonaire & Curaçao dan Republik Domica pastelitos atau catibías. Umumnya, bentuknya hampir sama, cuba berbeza daripada segi inti, sama ada lebih pedas atau sebaliknya. Cara penyediaannya juga hampir sama, digoreng. Terdapat juga variasi yang menyediakan resepi ini dengan membakarnya dalam ketuhar – seperti penyediaan pizza. Sebelum kita semua mula percaya bahawa empanadas atau karipap berasal daripada Amerika Latin, izinkan penulis menyambung kisah ini.
Empanada ini boleh dikesan kemunculannya semenjak zaman Andalusia lagi – wilayah terletaknya Sepanyol, Portugal, Gibraltar dan Perancis kini. Sebuah buku masakan pada tahun 1520 dalam bahasa Catalan yang berjudul Libre del Coch karangan Ruperto de Nola, menyatakan bahawa empanada adalah pastri (tepung yang diuli dengan air) yang dilipat dengan inti yang berbagai – ayam, daging, sayuran, dan makanan laut. Ada pandangan yang mengatakan resepi ini berasal daripada Samosa di India. Akan tetapi, jika kita ke Vietnam, pasti kita akan berjumpa dengan 'epok-epok' sebagaimana di Malaysia bentuknya, cuma di sana makanan ini dipanggil Bánh xếp.
Posted: 27 Feb 2013 05:07 AM PST
Bahasa tulisan diperlukan setelah kita mula meninggalkan tradisi lisan. Jadi, dalam pengertian ini, kita berbicara soal tulisan. Jika menyentuh tentang lisan, nenek moyang kita banyak sekali meninggalkan kearifan tempatan yang berbentuk pantun, syair, petua, cerita rakyat yang diwarisi cucu cicitnya hingga hari ini. Bahasa yang digunakan dalam lisan maupun tulisan tidak jauh bezanya – sama-sama indah dan mengandungi pesan yang berguna.
Yang membezakan satu bahasa dari bahasa yang lain, selain sisi teknikalnya, adalah kegunaan dan kepentingannya. Di Malaysia, bahasa telah menempuh sejarah panjang sebagai alat perjuangan dan penyatuan mencapai kemerdekaan, seperti cuba ditimbulkan dalam "Perjalanan Mencari Bahasa", karya Sasterawan Negara Abdullah Hussain dan sekian banyak karyanya yang lain. Peranan bahasa seperti ini juga dikongsi oleh pengarang dari Indonesia iaitu Pramoedya Ananta Toer. Dalam konteks ini, kedua-duanya menjadikan bahasa tidak baku pada ucapan tetapi dilangsungkan dalam tindakan – sebagai medium menyedarkan massa daripada proses pembebalan, penindasan, penjajahan, dan perlecehan seksual. Justeru, bahasa di sini dapatlah dikatakan bukan sahaja untuk meluahkan rasa hati tetapi juga bagaimana ia diterjemahkan kepada satu isu yang universal sifatnya iaitu kemanusiaan.
Tidak sedikit orang yang menggunakan bahasa untuk komersialisme, kuasa dan kepentingan sendiri-sendiri. Dan tujuan inilah yang hanya akan merendahkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perjuangan, sebaliknya dianggap sebatas alat komoditi dan alat propaganda murahan. Disebabkan itu lahirnya Asas 50 di Malaysia dan tidak hairanlah Syed Nasir Ismail, Asraf Abdul Wahab, Usman Awang, Abdul Samad Ismail antaranya dituduh sebagai pelampau bahasa yang menggunakan isu bahasa kebangsaan untuk menggulingkan Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman waktu itu.
Sedikit sebanyak, kegunaannya di sini menunjukkan sisi bahasa yang mampu membaiki nasib rakyat dan membangunkan bangsa ini. Adanya sejarah membuktikan satu-satu perkara itu pernah terjadi, sebagaimana kebangkitan rakyat secara kolektif biar di Malaysia ataupun Indonesia pernah dan sedang terjadi. Kebangkitan atas rasa yang sama bahawa kehidupan orang Melayu berada dalam berbagai-bagai masalah dan dilema seperti dikiaskan karya A. Samad Said (Hati Muda Bulan Muda), Shahnon Ahmad (Seketul Hati Seorang Pemimpin), Keris Mas (Saudagar Besar dari Kuala Lumpur), Anwar Ridhwan (Parasit), Usman Awang (Matinya Seorang Pahlawan-Jebat) dan banyak lagi. Sejumlah karya ini menunjukkan usaha tidak putus-putus daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, DBP yang bertitik tolak dari Pakatan Belajar-Mengajar Pengetahuan Bahasa, PBmPB yang inisiatifnya sejak penghujung abad ke-19.
Tuntasnya, bahasa di sini tidak hanya memainkan peranan sebagai medium perantara dua orang kekasih tetapi lebih jauh lagi bahasa menentukan survival anak bangsa. Bahasa umumnya dan bahasa Melayu khasnya jelas merupakan wadah perjuangan bersama-sama dengan wujudnya manusia. Bahasa bukan hanya untuk menyampaikan kata yang muluk-muluk tetapi juga menyuarakan kemelaratan dan kemiskinan. Semoga warna warni bahasa tidak mempalitkan ke muka kita warna arang!
It served me well for at least two good years.
Posted: 27 Feb 2013 06:32 AM PST
"Keterangan yang diberikan (Gobalakrishnan) hanya penafian kosong semata-mata dan beliau tak ingat perkara yang berlaku pada hari tersebut," kata Jagjit.
"Mereka berada dalam himpunan di hadapan Istana yang tidak dihalang polis sebaliknya polis bagi mereka masa untuk serahkan memorandum.
"Tujuannya bukan untuk memudaratkan, maka saya berpendapat kedua-dua tertuduh telah berjaya menimbulkan keraguan munasabah tehadap kes pendakwaan," kata Jagjit.
"Kami bersyukur dan berterima kasih atas sokongan rakyat.
"Saya berpendapat sebarang kes yang melibatkan himpunan yang tidak bersenjata perlu digugurkan.
"Peguam Negera perlu pertimbang semula untuk tarik balik kes perhimpunan aman yang berdasarkan Akta Polis terdahulu kerana sekarang sudah ada Akta Perhimpunan 2012," kata Mat Sabu ketika ditemui pemberita di luar mahkamah.
"Terbukti perjuangan Bersih sejak dulu tetap relevan dan kita akan teruskan sehingga matlamat memulihkan sistem pilihan raya terlaksana," katanya.
Posted: 27 Feb 2013 03:52 AM PST
1. Myanmar Muslims must understand and accept that we need to be in various fields of Socio-political struggles: e.g. in NLD, NGOs, in Parliament, in the government (National or local level), Private and Joint Venture business, USDP, Various Religious or Islamic organizations whether Islamic Council, Ulama, Tabaligue, 8888, ABSDF, Different other religious groups or even different rebel groups. (Even in military/police if possible).2. We should avoid attacking other different sects' religious activities, which is their personal affairs.
6. We should open the door of communication oraHOT LINE with ALL the Islamic organizations, NLD, Monks (who understand and want peace) and the present gov, local authorities, police USDP etc. to "REQUEST" some activities during emergencies like this time.
TQ Bravo.That is the way….Unity in diversity isaconcept of "unity without uniformity and diversity without fragmentation"  that shifts focus from unity based onamere tolerance of physical, cultural, linguistic, social, religious, political, ideological and/or psychological differences towardsamore complex unity based on an understanding that difference enriches human interactions. The concept of unity in diversity was used "in non-Western cultures such as indigenous peoples in North America and Taoist societies in 400-500 B.C. In premodern Western culture it has been implicit in the organic conceptions of the universe that have been manifest since the ancient Greek and Roman civilizations through medieval Europe and into the Romantic era."http://en.wikipedia.org/wiki/Unity_in_diversity
'ကြောင်ကို ဘယ်သူ ချူဆွဲပေးမလဲ?" တဲ့။
" နွားပလာတာကျွေးသလို " တဲ့။
ပထမတစ်ယောက်က "၁" တဲ့၊
နောက်တစ်ယောက်က "င" တဲ့၊
နောက်တစ်ယောက်က "ပ" တဲ့၊
နောက်တစ်ယောက်က "ဂ" တဲ့ ဗျား။
" ဟဲ့ နင့်နားရွက် ကျီးချီသွားပြီပြောရင်
ဘယ့်နှယ် ဒေါသတကြီး ကျီး ကိုလိုက်မောင်းနေရတုန်း " တဲ့။
"ကြောင်ကို ဘယ်သူ ချူဆွဲပေးမလဲ?" Don't worry brother, we all are doing this successfully. U Wira Thu, Aye Mg, Racist Rakhines, Bigot Monks, Radical Hard liners from USDP, Military and Government and undemocratic hypocrites from NLD already got bells on their neck. The whole world could see and hear them.
" နွားပလာတာကျွေးသလို "…The duty of Muslims is to resist the religious oppression and to educate or even invite those non-believers. It is our duty to feed them, if these Bigot non-believers refused to eat Plata, just mixed with grass or hey or Hnan Phat or by product after extracting the sesame seeds.
"လူမညီ၊" ၁ ဂဏန်းကို ဝိုင်းကြည့်နေတဲ့လူ လေး ယောက်မှာ… We all must agree to disagree in some agreeable way.
မောတယ်။ Listen to Sai Hti Sai's song, "Bicycle".
Posted: 27 Feb 2013 03:40 AM PST
Maureen and the male Martian go off toabedroom where the Martian strips.. He's got only
a teeny, weenie member about half an inch long and justaquarter-inch thick.
The next day the couples rejoin their other partners and go their separate ways. As they walked along,
Charlie asks, 'Well, was it any good?'
IF YOU DON'T LAUGH AT THIS, YOU ARE BEYOND HOPE !! :-)
Thanks to Mr SKT who sent the following list of funny situations.
1. An applicant was filling outajob application. When he came to the question, Have you ever been arrested?
The next question, intended for people, who had answered in the affirmative to the last one, was Why?
The applicant answered it anyway: Never got caught.
2. Employer to applicant: In this job we need someone who is responsible.
Applicant: I'm the one you want. On my last job, every time anything went wrong, they said I was responsible.
3. Young man, do you think you can handleavariety of work? I ought to be able to. I've had ten different
jobs in four months.
4. Judge to defendant: Aren't you ashamed, coming here for the third time?
Defendant: Well, you come every day.
5. Why did the man wearawet shirt?
Because the shirt's label said: Wash and wear..
6. Q: Which city is trying to get rid of its mad people?
7. A teacher was testing the young student's intelligence. When is your birthday dear? asked the teacher
to his six-year old.
22nd February, said the child.
What year, my dear? Asked the teacher.
Every year, said the child withasmile.
8. Sunny: My mom took me to the cemetery last Sunday.
Sonia: Oh! anyone dead?
Sunny: Yes. All of them
9. Knock, Knock. Who's there?
10. Q: What is the best place to go to when you are dying?
11. Q: When can 60 people stand under an umbrella without getting wet?
A: When it isn't raining.
12. Raju: How many sides! doesacircle have?
Ravi: A circle does not have any side.
Raju: Yes, it does, the inside and the outside.
13. Q: Why are doctors and lawyers never perfect?
A: Because they are always practising.
Posted: 27 Feb 2013 02:30 AM PST
Source: Harry Mdy
အကောက် ၀န်မင်းကြီးကျောင်းတိုက် ကျောင်းဒကာ အကောက်ဝန် မင်း မွလ္လာအီဘရာဟင် မိသားစု၊ အကောက်ဝန်မင်းကြီးကျောင်းတိုက် တိုက်အုပ် ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တပါကဋ၊ ပန်းချီ ညိုပြာ တို့နှင့်အမှတ်တရ။အကောက် ၀န်မင်းကြီးကျောင်းတိုက် ကျောင်းဒကာ အကောက်ဝန် မင်း မွလ္လာအီဘရာဟင် မိသားစု ယခုတိုင် အကောက် ၀န်မင်းကြီးကျောင်းတိုက် သိမ်တော်တွင် ချိတ်ဆွဲထားသည်။
အကောက်ဝန်မင်းကြီးကျောင်းတိုက် တိုက်အုပ် ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တပါကဋ ဖုန်း ၀၉၂၀၁၆၄၃၈ ထံ သမိုင်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Posted: 27 Feb 2013 02:25 AM PST
"Truly great literature loosens the tongue of the dumb and opens the eyes of the blind. It makes man conscious of himself and of his destinies."
-George Lukacs, Gorki's Human Comedy-
"Menggambarkan sesuatu yang nyata dalam sajak-sajak dan cerita-cerita pendek mahupun novel belum bererti satu ciptaan yang mengandung realisme…Kekejaman daripada masyarakat yang tidak adil menjadi perhatian. Perbezaan kelas dan keburukan rakyat murba menjadi bahan cerita."
-Asraf, Esei Sastera ASAS 50'-
Sesungguhnya manusia selalu menjadi mangsa tebusan kepada kehidupan, atau 'realiti'. Pengurungan ini semakin mencengkam dan melemaskan apabila kita melintasi ke alam kedewasaan dan selanjutnya.
Posted: 27 Feb 2013 03:26 AM PST
နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာ ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့သည့် လူရည်ချွန်ရွေးချယ်မှု ယခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ပြုလုပ် တစ်နိုင်ငံလုံး ခရိုင်အလိုက် ထူးချွန်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၅၁၀ အား လူရည်ချွန်အဖြစ် ရွေးချယ်ထား Eleven Media
၁၉၆၀ ကျော် ကာလက စစ်ကိုင်း ရွာသစ်ကြီးသို့ ရောက်ရှိလာသော လူရည်ချွန်မောင်မယ်များအား လုပ်သားပြည်သူမိဘများက ကြိုဆိုနေကြစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေး ၁၉၆၂-၁၉၇၃)
အခြေခံပညာ ကျောင်းများ၌ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာ ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့သည့် လူရည်ချွန် ရွေးချယ်မှုအား ယခု ပညာသင်နှစ်တွင် စတင်၍ ပြန်လည်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အခြေခံပညာ ကဏ္ဍတွင် ခရိုင်အလိုက် ထူးချွန်ကျောင်းသား ၅၁၀ အား လူရည်ချွန်အဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်ကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရပါသည်။ ထိုသို့ ရွေးချယ်ရာ၌ အဌမတန်း၊ န၀မတန်းနှင့် ဒသမတန်းအဆင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကိုသာ လက်ရှိအချိန်တွင် ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်အကြာ၌ ယခုကဲ့သို့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် လူရည်ချွန်များကို တစ်ကျော့ပြန်အဖြစ် ပြန်လည်ရွေးချယ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
လူရည်ချွန်တစ်ဦးအနေဖြင့် ကျောင်းစာပိုင်းတွင်သာမကဘဲ အားကစားစွမ်းရည်၊ ကာယစွမ်းရည်နှင့် အထွေထွေ ဗဟုသုတပိုင်းတွင်ပါ နှံ့စပ်ကျွမ်းကျင်ရန်လို . . .
"ဒီလိုမျိုး ဘက်စုံထူးချွန် လူရည်ချွန်တွေ ပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက် စာမေးပွဲ စစ်ဆေးမှုတွေကိုတော့ ခရိုင်အလိုက် ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံပညာ ဦးစီးဌာနအလိုက် တင်ပြလာတဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေထဲကမှ ထူးချွန်သူတွေကို ရွေးချယ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးချယ်ခံရတဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေကို နွေရာသီ ပိတ်ရက်မှာ အပန်းဖြေခရီးစဉ်တွေကို စေလွှတ်ပေးဖို့လည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ခရီးစဉ်တွေကတစ်ဆင့် နေရာ၊ ဒေသ ကွဲပြားစွာ တွေ့ဆုံကြမယ့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ အချင်းချင်း တစ်ဦးချင်းအလိုက် စွမ်းရည်ဆက်သွယ်မှု၊ တစ်နယ်နဲ့တစ်နယ် စုပေါင်းပြီး အမြင်ချင်း ဖလှယ်နိုင်မှုတွေ ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်" ဟု ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန လူရည်ချွန် ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့မှ ဒေါ်ခင်မာထွေးက ပြောပြခဲ့သည်။
၂၀၁၂-၁၃ ပညာသင်နှစ်၌ စတင်၍ ယခုကဲ့သို့ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့သည့် ဘက်စုံထူးချွန်သူ လူရည်ချွန်များ ရွေးချယ်ရာတွင် မြို့နယ်အရေအတွက် အနည်းအများ အလိုက် အချိုးကျ ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပြီး မြို့နယ်လေးမြို့နယ် အောက်ရှိသော ခရိုင်များ၌ အဋ္ဌမတန်း ကျောင်းသားတစ်ဦး၊ န၀မတန်းနှင့် ဒသမတန်း ကျောင်းသားနှစ်ဦးစီ၊ မြို့နယ်လေးမြို့နယ် အထက်ရှိသော ခရိုင်များ၌ အဋ္ဌမတန်း ကျောင်းသားနှစ်ဦး၊ န၀မတန်းနှင့် ဒသမတန်းကျောင်းသား လေးဦးစီ ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
"လူရည်ချွန် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေကို မြို့နယ်အဆင့် စာမေးပွဲ၊ ခရိုင်အဆင့် စာမေးပွဲတွေ အဆင့်ဆင့် စစ်ဆေးပြီးမှ လူရည်ချွန် ကျောင်းသားတွေအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကလည်း လူရည်ချွန် ကျောင်းသားတွေ ရွေးချယ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခု၂၀၁၂-၁၃ ပညာ သင်နှစ်မှာတော့ ဘက်စုံထူးချွန် လူရည်ချွန်တွေကို တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ အနေနဲ့ ပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်" ဟု အမှတ် (၃) အခြေခံပညာ ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။
ထိုသို့ရွေးချယ်ရာ၌ ကျောင်းအသီးသီးရှိ အောက်တိုဘာလစစ် ပထမနှစ်ဝက် စာမေးပွဲတွင် အမှတ် အများဆုံးရသည့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအား မြို့နယ်ဘက်စုံထူးချွန် ဖြေဆိုခွင့်ပေးပြီး မြို့နယ်တွင် အမှတ်အများဆုံး ရသည့်သူ နှစ်ဦးကို ခရိုင်အဆင့် ဘက်စုံထူးချွန် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုစေကာ လူရည်ချွန်အဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ဖြေဆိုရာတွင် ရေးဖြေ၊ နှုတ်ဖြေနှင့် ကာယပြိုင်ပွဲများ စီစဉ်ပြီး ဖြေဆိုစေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
အထက (၁) ဒဂုံမှ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဒေါက်တာအောင်ကိုကိုက "၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာလက ခရိုင်အဆင့် စာမေးပွဲတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီကနေ ထွက်ရှိလာတဲ့ ဘက်စုံထူးချွန် ကလေးတွေကို နွေရာသီမှာ အပန်းဖြေခရီး ပို့ပေးပါမယ်။ ရှစ်တန်းက ပုဂံ၊ ကိုးတန်းက တောင်ကြီး၊ အင်းလေးနဲ့ ၁၀ တန်းက ချောင်းသာ၊ ငွေဆောင် ဖြစ်ပါတယ်" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဘက်စုံထူးချွန် လူရည်ချွန်အဖြစ် ရွေးချယ်ရာတွင် မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ အထွေထွေဗဟုသုတ၊ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုများအား ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း၌ မြို့နယ်အဆင့် စာမေးပွဲနှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ အတွင်း၌ ခရိုင်အဆင့် စာမေးပွဲများဖြင့် စစ်ဆေးရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
အင်းလေးခေါင်တိုင်စခန်းတွင် ဖွင့်လှစ်သည့် လူရည်ချွန်အပန်းဖြေစခန်း၌ ထိုစဉ်က ရှမ်းပြည်နယ် ဥက္ကဋ္ဌက အမှာစကားပြောကြားနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – စွယ်စုံကျမ်းနှစ်ချုပ်)
ဘက်စုံထူးချွန် လူရည်ချွန် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် စုပေါင်းစခန်းအား နေပြည်တော်တွင် ထားရှိသွားမည်ဖြစ်ပြီး နွေရာသီ အပန်းဖြေခရီးနှင့် လေ့လာရေး ခရီးစဉ်များအား ဧပြီလတွင် စတင်စေလွှတ်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါ လူရည်ချွန်များထဲမှ ထူးချွန်သူများအား ထပ်မံရွေးချယ်ကာ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ လေ့လာရေး ခရီးစဉ်များ စေလွှတ်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
ယခင်က လူရည်ချွန်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရရန် မလွယ်ကူကြောင်းနှင့် ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့သည့် လူရည်ချွန် စီမံကိန်းကို ပြန်လည် အကောင်အထည်ဖော်နေသည့် အတွက်လည်း လူရည်ချွန်ဟောင်းများ အနေဖြင့် ကြိုဆိုကြောင်း နယ်ပယ် အသီးသီးမှ လူရည်ချွန် ရရှိခဲ့ဖူးသူများ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
၁၉၇၄၊ ၁၉၇၅၊ ၁၉၇၆၊ ၁၉၇၇ နှင့် ၁၉၈၀ ခုနှစ်များတွင် လူရည်ချွန်ဆု ရရှိခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံ စစ်တုရင်အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်လွင်က "အရင်က လူရည်ချွန်ဆု ဖြေဆိုခွင့်က ကျောင်းအဆင့် တန်းခွဲအားလုံးမှာ အဆင့် ၁ ကနေ ၁၀ အတွင်းရရင် မြို့နယ်အဆင့်မှာ ဖြေဆိုခွင့်ရတယ်။ ခုနစ်တန်းကနေ ၁၀ တန်းအထိ ဖြေဆိုခွင့်ရတယ်။ မြို့နယ်အဆင့် စာမေးပွဲမှာ မြန်မာစာ၊ သချာင်္၊ အထွေထွေ ဗဟုသုတ ရေးဖြေ ဖြေရတယ်။ နှုတ်ဖြေ ဖြေရတယ်။ ပြီးရင် အားကစား လေးမျိုးထဲက တစ်မျိုးကို မဖြစ်မနေ ယှဉ်ပြိုင်ရတယ်။ အဲဒါတွေ ယှဉ်ပြိုင်ပြီးမှ ရေးဖြေအမှတ်၊ နှုတ်ဖြေအမှတ်နဲ့ ကြံ့ခိုင်မှု စွမ်းရည်အမှတ်ဆိုပြီး အသီးသီး အမှတ်တွေရတယ်။ နောက်တစ်ခုက ပတ်ဝန်းကျင် အသင်းအဖွဲ့ လှုပ်ရှားမှု အမှတ်တွေပါ ရရှိဖို့အတွက် လူမှုရေး ကိစ္စတွေမှာ ပါဝင်ရတယ်။ ဥပမာ-ကျောင်းကောင်စီ၊ ကြက်ခြေနီစတဲ့ အသင်းတွေမှာ ပါဝင်မှုတွေ၊ အားကစား အဖွဲ့တွေမှာ ပါဝင်မှုတွေ စတာတွေ အပေါ်မူတည်ပြီး အမှတ်ပေးတယ်။ အဲဒါတွေအားလုံး ပေါင်းပြီးရတဲ့ အမှတ် အများဆုံး သူတွေက ခရိုင်အဆင့် ဖြေခွင့်ရတယ်။ ခရိုင်မှာလည်း အလားတူ ထပ်မံဖြေဆို ယှဉ်ပြိုင်ရတယ်။ ခရိုင်မှာ ဖြေဆိုတဲ့သူတွေ အားလုံးထဲကနေမှ ဗဟိုအဆင့်ဖြစ်တဲ့ ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာနကနေ ရွေးချယ်ပြီး လူရည်ချွန်ဆု ချီးမြှင့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုရရှိတဲ့ သူတွေကို အပန်းဖြေခရီးတွေ လွှတ်တာရှိတယ်။ သုံးနှစ်ဆက်တိုက် လူရည်ချွန်ဖြစ်တဲ့ သူတွေကို တက္ကသိုလ် ပညာသင်ဆုဆိုပြီး ပေးတယ်။ တစ်လကို ၇၅ ကျပ် ပေးတယ်။ တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းလခက တစ်လကို ၁၅ ကျပ်၊ အဆောင်စရိတ်က ၅၇ ကျပ် စုစုပေါင်း ၇၂ ကျပ်ပဲ ပေးရလို့ ကျောင်းနေဖို့ လုံလောက်တယ်။ လူရည်ချွန်ဖြစ်တဲ့ သူတွေထဲက သူငယ်ချင်း အတော်များများက နိုင်ငံခြား ရောက်နေကြတယ်။ လက်ရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေသက်ခင်လည်း လူရည်ချွန်ပဲ။ တခြားနယ်ပယ်တွေမှာလည်း လူရည်ချွန် ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူတွေ ရှိတယ်။ စာပေနယ်ပယ်မှာလည်း ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်လည်း လူရည်ချွန်ပဲ၊ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်လည်း လူရည်ချွန်ပဲ" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
လူရည်ချွန်တစ်ဦး အနေဖြင့် ကျောင်းစာပိုင်းတွင်သာ မကဘဲ အားကစားစွမ်းရည်၊ ကာယစွမ်းရည်နှင့် အထွေထွေ ဗဟုသုတပိုင်းတွင်ပါ နှံ့စပ်ကျွမ်းကျင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၁၉၆၆၊ ၁၉၆၇၊ ၁၉၆၈၊ ၁၉၆၉ ခုနှစ်များတွင် လူရည်ချွန်ဆုများ ရရှိခဲ့သူ မြန်မာရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း အငြိမ်းစား သုတေသန အရာရှိချုပ် ဦးအောင်ကြည်ဝင်း ကလည်း "အားကစားစွမ်းရည်၊ ကာယစွမ်းရည်၊ အထွေထွေ ဗဟုသုတ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုတွေ အပေါ်မှာလည်း မူတည်ပြီး အမှတ်ပေးတယ်။ ဥပမာ- ကြက်ခြေနီ၊ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် စတဲ့သူတွေဆို အမှတ်ပိုရတယ်။ အရင်က လူရည်ချွန်ဖြစ်ဖို့က တော်တော် အားထုတ်ကြိုးစားမှ ဖြစ်တယ်။ ကျောင်းအဆင့် ပထမ၊ တစ်မြို့နယ်လုံး ပထမ၊ ပြီးရင် ခရိုင်အဆင့် ပထမ၊ အဲဒါတွေရရှိမှ လူရည်ချွန်ဖြစ်တယ်။ ခရိုင်အရည်အတွက် ရှိသလောက်ပဲ လူရည်ချွန် အရေအတွက် ရှိတယ်။ တက္ကသိုလ်မှာဆို တစ်နှစ်မှာ တက္ကသိုလ် တစ်ခုလုံးမှာ မေဂျာတစ်ခုမှာ တစ်ယောက်ရွေးတယ်။ လူရည်ချွန် စရွေးတဲ့ဟာက ၁၉၆၄ ခုနှစ် မှာ စရွေးတယ်။ အဲဒီစနစ်ကို ဒေါက်တာညီညီက စတယ်လို့ သိရတယ်။ အရေးအခင်း မတိုင်ခင် ရပ်သွားတယ်" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
လူရည်ချွန် ရွေးချယ်ဆုချီးမြှင့်မှု စီမံကိန်းကို တော်လှန်ရေးကောင်စီခေတ် ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် စတင်အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းစီမံကိန်းအရ လူရည်ချွန်များကို ရွေးချယ်ရာတွင် ကျောင်းအဆင့်တွင် ဥာဏဗလနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့ကို အမှတ်ပေး စိစစ်ကာ ဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် ပညာရေးလက်တွေ့ ဖွံ့ဖြိုးမှု လုပ်ငန်းများ၊ ကျောင်းကောင်စီ လုပ်ငန်းများ၊ အခြားအသင်း အဖွဲ့များတွင် ခေါင်းဆောင်မှု၊ ၀တ်စားဆင်ယင်မှု၊ ကျောင်းတက်မှန်ကန်မှု၊ ကျောင်းတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်မှု ကြံ့ခိုင်စွမ်းရည်တို့ကို အသေးစိတ် စိစစ်ကြောင်း သိရသည်။ မြို့နယ်နှင့် ပြည်နယ်/တိုင်း အဆင့်တွင် စာတွေ့စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကာယဗလ၊ အခြားဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် လက်တွေ့နှုတ်ဖြေတို့တွင် အမှတ်စနစ်ဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
လူရည်ချွန်ဆုရရှိဖူးသည့် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ထင်ရှားသူအချို့
- ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက
- ဒေါက်တာဖေသက်ခင် (ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာန)
- ဒေါက်တာမြအေး (ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန)
- ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင် (CEO, Eleven Media Group)
- ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင် (ကွယ်လွန်) (The Voice,Living Color) တည်ထောင်သူ
- ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့် (ငြိမ်း)
- ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (အသည်း အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)
- ဦးမောင်မောင်လွင် (စစ်တုရင်အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ)
- ဒေါက်တာချယ်ရီ သန်းသန်းတင် (သားဖွားနှင့်မီးယပ်အထူးကု)
Posted: 27 Feb 2013 12:27 AM PST
Terbaru, akhbar The Star melaporkan Presiden UMNO itu berkata bahawa, "Undi untuk PKR akan merosakkan akidah sementara undi untuk PAS akan memecahbelahkan umat Islam; manakala undi DAP akan mengakibatkan penindasan Islam."
"Ke mana perginya sifat wasatiyyah atau kesederhanaan yang diuar-uarkan Datuk Seri Najib sendiri? Ini membuktikan slogan yang dilaungkan seperti Wasatiyyah dan 1Malaysia hanya slogan kosong dan tidak dituruti beliau sendiri, apabila mendakwa dengan begitu jahat dan tidak berasas tanpa mengemukakan sebarang bukti," ujar beliau dalam kenyataan medianya hari ini.
"Peruntukan hal ehwal agama Islam bukan sahaja ditingkatkan berkali ganda berbanding kerajaan sebelum ini, tanah bernilai hampir RM80 juta diperuntukkan untuk pembinaan Ibu Pejabat Mahkamah Syariah Pulau Pinang setinggi tujuh tingkat bagi menggantikan bangunan lama dua tingkat.
"Selain itu, kerajaan negeri juga mengusahakan industri halal, melakukan pengambilan balik tanah untuk pembesaran perkuburan Islam, meningkatkan elaun bulanan tok siak dan bilal sebanyak 80 peratus, mengiktiraf para huffaz dan untuk kali pertama memberi peruntukan tahunan kepada Sekolah Agama Rakyat (SAR)," katanya.
"Adalah jelas dakwaan Najib itu berniat jahat dan bertujuan menghasut sentimen perkauman dan agama di kalangan masyarakat Islam terhadap Pakatan Rakyat, khususnya DAP.
"Bagi mengelak sebarang kekeliruan dan persengketaan, saya bagi pihak DAP membuat laporan polis terhadap Datuk Seri Najib atas dakwaan fitnah yang berbahaya itu," katanya.
Posted: 26 Feb 2013 09:37 PM PST
Posted: 26 Feb 2013 08:28 PM PST
26. Pada 19.10.2006, saya tiba di rumah Abdul Razak Baginda di Bukit Damansara bagi memulakan tugasan malam. Seperti biasa, saya meletakkan kereta saya di luar. Saya kemudiannya melihat sebuah teksi Proton Perdana berwarna kuning berlalu. Terdapat3orang wanita di dalamnya, yang mana salah seorang daripadanya adalah Aminah. Teksi itu melakukan pusingan U, lalu berhenti di depan rumah. Kemudian, wanita-wanita itu menurunkan tingkap teksi dan mengucapkan "Selamat Deepavali". Selepas itu, teksi berkenaan berlalu pergi.
30. Azilah bertanya kepada saya sama ada wanita itu adalah Aminah dan saya berkata "Ya". Dia kemudiannya berjalan pergi dan membuat beberapa panggilan dengan menggunakan telefon bimbitnya. Sepuluh minit selepas itu, sebuah Proton Saga biru yang dipandu oleh seorang lelaki Melayu berlalu dengan perlahan-lahan. Tingkap kereta itu diturunkan dan pemandunya memerhatikan kami.
33. Selepas 19.10.2006, saya terus bekerja untuk Abdul Razak Baginda di rumahnya di Bukit Damansara, iaitu antara jam 7:00 malam dan 8:00 pagi keesokan harinya. Ini kerana dia telah menerima beberapa SMS berbau ancaman daripada seorang wanita bernama 'Amy', yang tampaknya adalah sepupu 'Aminah' di Mongolia.
52. Tidak lama kemudian, iaitu pada sekitar pukul 7:30 pagi, Abdul Razak Baginda menerima SMS daripada Datuk Seri Najib Tun Razak dan menunjukkannya kepada saya dan peguamnya. SMS itu berbunyi, "Saya akan berjumpa dengan IGP pada pukul 11.00 pagi hari ni... masalah ni akan diselesaikan... bawa bertenang."
Posted: 26 Feb 2013 07:34 PM PST
In an all new attempt to prevent further air pollution, the environmental watchdog in China has taken an extreme step. It has gone ahead and proposedabarbecue ban. Here are the details you need to know about this ban and everything else that makes China the world's most polluted nation.
What's the ban all about?
First, the new ban in China is all about barbecues. No delicious decision to look forward to that because what it means for China is this – soon people won't be able to partake in any barbecue-related activity. For better or for worse, the smoke that emanates from barbecues won't spoil the environment in China anymore. That's at least the hope with which the Chinese government is planning to expedite the ban.
Earlier in February, the Ministry of Environmental Protection (MEP) releasedatechnical draft document declaring the ban on barbecues in densely populated Chinese cities. The draft clearly states that major cities where pollution isareal problem must make an attempt to adopt legislation that cuts out barbecue-related activities from the big picture. The draft is China's answer toagrowing PM2.5 pollution problem. PM2.5 is particulate matter that's lesser than 2.5 microns in diameter result in an extreme form of air pollution. The reason is simple – PM2.5 is such fine particulate matter that it can easily be embedded in people's lungs and cause serious respiratory issues.
Posted: 26 Feb 2013 05:19 PM PST